को हुन विद्या भण्डारीसँग राष्ट्रपतिमा भिड्ने लक्ष्मी राई ? - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
को हुन विद्या भण्डारीसँग राष्ट्रपतिमा भिड्ने लक्ष्मी राई ?
प्रकाशित मिति : बुधबार, फाल्गुन २३, २०७४
काठमाडौं भावी राष्ट्रपतिको दौडमा २ महिला देखिएका छन् । वाम गठबन्धनको समर्थनमा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र कांग्रेस नेतृ कुमारी लक्ष्मी राई चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन् । दुवै महिलाको गृहजिल्ला भोजपुर हो ।
उनीहरुमध्ये को राष्ट्रपति बन्ने यसको फैसला फागुन २९ गतेको निर्वाचनले गर्नेछ । वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीसँगै निर्वाचनमा होमिएकी कांग्रेस नेतृ राई कांग्रेस नेता तथा शहीद देवानसिंह राईकी छोरी हुन् । २००६ साल बैशाख २१ गते भोजपुरको छिनाम्खुमा जन्मिएकी लक्ष्मीले सेन्ट मेरिजबाट स्कुल शिक्षा सकेर त्रिविबाट अंग्रेजीमा स्नातकोत्तर गरेकी छिन् ।
देवेन्द्रकुमार राईसँग विहे गरेकी लक्ष्मीका दुई छोरी र एक छोरा छन् । भोजपुरको छिनाम्खुमा जन्मेर हाल पोखरेमा बसोबास गर्दै आएकी लक्ष्मी हाल काठमाडौंको बूढानीलकण्ठमा बस्दै आएकी छिन् ।
लक्ष्मी राईले ०३० सालदेखि नेपाली कांग्रेसको राजनीति गरेकी हुन् । पिता दिवानसिंह २०१५ सालमा सांसद निर्वाचित सांसद भएका थिए। उनी वीपी कोइराला सरकारमा सहायक मन्त्री बने। पञ्चायत कालमा दिवानसिंहको हत्या भएको थियो। रासस